Oppo R11 နှင့် R11 Plus တို့သည်ကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားသည် Androidsis
Oppo R11 နှင့် R11 Plus တို့သည်ကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
တရုတ်ကုမ္မဏီ Oppo ကမိုဘိုင်းဖုန်းများကိုတင်ဆက်သည့်အခါမနေ့ကဖြစ်ပုံရသည် R9s y R9s Plus အားအထူးစာနယ်ဇင်းထံမှအလွန်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူအဆုံးစွန်သော။ ယခုအခါတွင်ကုမ္ပဏီသည် TENAA အဖွဲ့အစည်းမှ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သော R11 နှင့် R11 Plus ဟုခေါ်သည့်အခြား Terminal နှစ်ခုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေပုံရသည်။
R9s နှင့် R9s Plus ကဲ့သို့ R11 နှင့် R11 Plus အသစ်များသည်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုပါလိမ့်မည် Qualcomm Snapdragon 660။ နှစ်ခုစလုံးတွင်တူညီသည့် dual-camera setup တပ်ဆင်ထားပြီး sensors ပေါင်းစပ်ထားသည် 16x optical zoom ပါဝင်သည့် 20 နှင့်2megapixels.
ရှေ့ကင်မရာနှစ်ခုတပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပေမယ့် 20 megapixel မှန်ဘီလူးဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ selfies တွေကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်လုံလောက်လိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ terminal နှစ်ခုစလုံးတွင် screen အောက်ရှိ fingerprint sensor နှင့် Oppo Color OS စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android 7.1 Nougat လည်ပတ်မှုစနစ်ရှိမည်။
Oppo R11 နှင့် R11 Plus တို့၏အဓိကကွာခြားချက်များ
Oppo R11 Plus အား
မိုဘိုင်းဖုန်းနှစ်လုံးအကြားအကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ကတော့စခရင်အရွယ်အစားမှာရှိသည် R11 တွင် ၅.၅ လက်မ 1080p AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်၏ display ကိုစဉ် R11 Plus အား6လက်မရောက်ရှိ.
အတွင်းပိုင်းတွင် R11 တွင်မှတ်ဉာဏ်တစ်ခုပါရှိသည် RAM ကို 4GB၏မှတ်ဉာဏ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ R6 Plus ၏ 11GB။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ R11 ဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ် 2900mAhR11 Plus တွင်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည် 3880mAhထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည်အလားတူဖြစ်နိုင်သော်လည်း Plus model သည်ပိုမိုအားကောင်းသည့် hardware နှင့် screen ကြီးများကိုရရှိသည်။
ထို့အပြင် R11 နှင့် R11 Plus အသစ်များသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် Oppo ၏ဈေးကွက်ကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်သည်ဟုထင်ရပြီး၎င်းဖုန်းများသည်သူတို့၏အလုပ်ကိုအောင်မြင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Oppo R11 နှင့် R11 Plus တို့သည်ကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့် TENAA ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
ပုံအသစ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Moto G5S ၏
Apple ကို Android သုံးစွဲသူများသို့ - "iPhone မှာဘဝကပိုရိုးရှင်းပါတယ်"